China Ihowuliseyili High-umgangatho ophezulu Sandblast kunye Plating Glass Rig Bong Glass Water Umbhobho Glass recycler Bong Manufacture and Factory |I-CanNABIZ
Ihoyile ekumgangatho oPhezulu weSandblast kunye nePlating Glass Rig Bong Glass Water Pipe Glass recycler Bong
Umthengi woRhwebo: Izinto eziKhethekileyo zeeVenkile: Iglasi, iglasi
Indawo yemvelaphi: Hebei, iChina iNombolo yoMfanekiso: CH-033
Igama leMveliso: Umbala we-Glass Bong: Mnyama / Blue / Customized
Ukupakisha: Ubunzima be-Bubble Bag: 0.45kg
Ubungakanani: 25cm MOQ: 100pcs
uphawu: free isiko logo
Iza nesitya se-14mm kunye ne-downstem edibeneyo
50 ukuba 499 :13.5USD
500 ukuba 4999 :12.7USD
5000 nangaphezulu: 12.1USD
Isampulu: Singakunika iisampulu ezilungiselelwe wena de waneliseke
Ulwazi lokuthumela ngenqanawe:
Ixesha lokukhokela: 3 - 30 iintsuku
Imilinganiselo ngeYunithi nganye: 50 × 25 × 25 Iisentimitha
Ubunzima ngeYunithi nganye: iikhilogram ezi-2
Iiyunithi ngokweKhathoni yokuThumela ngaphandle:15
Thumela Imilinganiselo yeKhathoni L/W/H:60 × 50 × 45 Iisentimitha
Thumela Ubunzima beKhathoni:
Q1.Ndingayifumana iodolo yesampulu yemveliso?
A: Ewe, siyakwamkela isampula ukuze uvavanye kwaye ujonge umgangatho.Iisampulu ezixutyiweyo zamkelekile.
Q2.Kuthekani ngexesha lokuhamba?
A: Iisampulu idinga iintsuku ezi-3-5, ixesha lokuvelisa ubuninzi lifuna iiveki ezi-1-2 kubungakanani bomyalelo ongaphezulu
Q3.Ngaba unayo nayiphi na imida ye-MOQ yemveliso?
A: I-MOQ ephantsi, i-1pc yokujonga isampuli iyafumaneka
Q4.Indlela yokuqhuba iodolo yemveliso ?
A: Okokuqala sixelele iimfuno zakho okanye isicelo sakho.
Okwesibini Sicaphula ngokweemfuno zakho okanye iingcebiso zethu.
Okwesithathu umthengi uqinisekisa iisampulu kunye nediphozithi yokubeka iodolo esemthethweni.
Okwesine Silungiselela imveliso.
Q5.Ngaba kulungile ukuprinta ilogo yam kwimveliso ye-l?
A: Ewe.Nceda usazise ngokusesikweni phambi kwemveliso yethu kwaye uqinisekise uyilo kuqala ngokusekwe kwisampulu yethu.
Q6: Ungathenga ntoni kuthi?
A: Iibhongo zeglasi yeglasi, iibhobho zamanzi zeglasi, iipercolators zeglasi, iihandpipe zeglasi, ii-accesorries zokutshaya iglasi ezifana ne-quartz banger, isitya, i-downstem, i-carb cap.
I-Q7: Ngaba uyasiqinisekisa ngeemveliso?
Q8: Kutheni kufuneka uthenge kuthi hayi kwabanye ababoneleli?
A: Sinomdla kwinkonzo yabathengi.Nawuphi na umbuzo uya kuphendulwa kwiiyure ezili-12.Sibonelela abathengi ngezisombululo zokumisa enye.Sizimisele kuphando lwemveliso kunye nophuhliso kunye nezinto ezintsha.Ngenkqubo yolawulo olusemgangathweni lwamazwe ngamazwe, iimveliso zethu zonke zenziwe ngokundilisekileyo nangokugqibeleleyo.
I-Q9: Uqinisekisa njani ukuba i-peoduct ayiyi konakala ngexesha lokuthutha?
A: Iimveliso zethu zipakishwe kwiingxowa ezintathu ze-bubble okanye kwi-carton package yodwa, kwaye ibhetshi nganye yempahla ithuthwa kusetyenziswa iipaliti zeplastiki ukuqinisekisa ukuba akuyi kubakho nzuzo yothutho.
I-Q10: Ngaba unokusiqulunqa kwaye usivelisele iimveliso ezintsha?
A: Ewe, singakuqulunqa iimveliso ezintsha, kufuneka usixelele nje into oyicingayo, siza kukunceda ukuba uyiqonde, kwaye siyakusayina isivumelwano sobumfihlo kunye nawe ukuqinisekisa ukuba ulwazi lwemveliso yakho aluyi kuvuzwa.
I-Q11: Ndimele ndenze ntoni xa ndifumana iimpahla kwaye ndifumanisa ukuba kukho imveliso ephosakeleyo okanye eyonakeleyo?
A: Iimveliso zethu zipakishwe kwiibhegi zeqamza ezinomaleko-ntathu okanye kwipakethe yeekhathoni zomntu ngamnye, kwaye ibhetshi nganye yempahla ithuthwa kusetyenziswa iipaliti zeplastiki ukuqinisekisa ukuba akusayi kubakho hambo lunengeniso:
Emva kokuba ukhangele ukuba zingaphi iimveliso ezonakalisiweyo, sixelele ngemifanekiso okanye iividiyo, kwaye siya kuphinda sikukhuphele iimveliso ezonakalisiweyo.
Emva kokuba ukhangele ukuba zingaphi iimveliso ezonakalisiweyo, sixelele ngemifanekiso okanye iividiyo, kwaye ke ixabiso elipheleleyo leemveliso ezonakalisiweyo liya kutsalwa kwi-oda lakho elilandelayo.
Emva kokubala inani leemveliso ezonakalisiweyo, siya kukubuyisela intlawulo ehambelanayo ngqo.
I-Q12: Ithini indlela yakho yokuhlawula?
A: IMigaqo yokuhanjiswa kweFlexible: EXW, FOB, CIF, DAP, DDU;
Iintlawulo ezininzi zeeNtlawulo: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Ngokuqhelekileyo siqhuba ukuthengiselana nge-T / T kunye ne-paypal.Ukuba uziva ungakhuselekanga, sinokwenza intengiselwano ngamaqonga eqela lesithathu anjenge-Alibaba.
Ngaphambili: Isimbo seKrisimesi seKrisimesi iRig Bong yokuTyaya uMbhobho waManzi umbhobho omtsha osebenza ngokutsha iBong
Bong Glass Ukutyeba
iiBongs zeglasi eziMbala
Lungiselela iBong yeGlasi eNgcolileyo
Dab Ukutshaya Rig
IiBongs zeglasi zoMyili
Glass Tube Bong
Imibhobho yamanzi eglasi enePerc
Khanyisa iiBongs zeglasi
Metallic Glass Bong
IBong yeglasi ePinki
Imibhobho yamanzi yeglasi yePyrex
Isanti yaqhuma iBong yeglasi
Isanti yaqhuma iglasi yeBong yetyhubhu
iiBongs zeglasi eziqhutyiweyo
Silicone Dab Bong
I-Silicone Dab Oyile Rig
IiBong zeglasi ezishinyeneyo
IiBongs zamanzi ezikhethekileyo
Isimbo seKrisimesi seGlass Rig Bong Smokin...
Iholeyili ekumgangatho oPhezulu wokuTyaya Ubunzulu beSandblasti...
Ihowuliseleli yeglasi yeBong yokuTyaya uMbhobho Wamanzi Omtsha Wat...
Inkampani iindaba zamva nje
Umpu weBong wokutshaya uphucula incasa yobomi
Umbhobho weRig bong ukutshaya ngaphandle usempilweni
Ukuba uyayifuna, nceda uqhagamshelane nathi kwangethuba
© Copyright 2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.